Isizwe sakwaNdébélé sinendlela enhle yokujezisa labo abenza okungalungile - Afrikhepri Fondation
Isizwe samaNdebele sinendlela enhle yokujezisa labo abenza okubi
Lubudlelwane babantu ku isizwe samaNdebele ezivela eNingizimu Afrika ziyancomeka. Lapho ilungu linephutha, kungekho sinqumo esibi, akukho unswinyo. Amalungu esizwe amgcinela ukwelashwa okuhluke ngokuphelele.
Isifundo esihle sabantu besigaba sesiNdebele
Impucuko yethu yesimanjemanje inezifundo ezinkulu esintwini ezingazifunda komakhelwane bayo. Ikakhulukazi phakathi kwesizwe samaNdebele.
Yize kunjalo sithanda ukukholelwa ukuthi siyingxenye "yomphakathi ophucukile kakhulu". Uhlobo lomvuthwandaba womlando wesintu lapho ukukhetha okwenziwe kungcono kakhulu.
Kodwa-ke, eminye imiphakathi emhlabeni wonke inokusebenza komphakathi okungahluka kakhulu kunokwethu. Ngabe akulungile kangako kukho konke lokho?
Asikho isigwebo esizweni samaNdebele
Phakathi kwamaNdebele, isizwe saseNingizimu Afrika, lapho umuntu enza iphutha, lokho kuyiphutha: amanye amalungu omphakathi asabela ngesintu esingabonakala siphazamisa kithina baseNtshonalanga. A umuzwa onamandla wobuntu uvela kulo muntu
Izinsuku ezimbili, bazungeza "ngeshwa" baxoxe naye ngakho konke okuhle nokuhle akwenzile esikhathini esedlule. Ngakho-ke bazokwazisa isihloko esilahlekile okwesikhashana ngangokunokwenzeka. Ngale ndlela bamvumela ukuthi aphinde axhumane nesimo sakhe sangempela futhi abuyisele iqembu kabusha. Akunasigwebo esidingekayo. Ukubuyiselwa komphakathi ngokushesha.
Esizweni sesiNdebele, inkolelo yokuthi abantu bahle ngokwemvelo nokuthi bonke bafuna ukuphepha, uthando, ukuthula nenjabulo kuqinisekile. Kulolu cwaningo, iphutha lomuntu siqu lingenzeka, kodwa amalungu omphakathi aqinisekisa ukuthi omunye nomunye akalahleki.
Nathi: ukucindezelwa nokuvinjelwa kwenkululeko
Ukubheka kanye nesenzo esihle esivela emphakathini weNdebele ukuthi lowo ohlulekayo kubonakala kude kakhulu nokusebenza kwethu. Kodwa singayinikeza kanjani isikhathi nesidingo esifanele? Isikhathi sethu esitholakalayo sinciphise, indlela yethu yokuphila yomkhiqizi-umthengi iphelele ngokuphelele enkosini yayo: imali.
I-Ndebele ifuna ukuxabisa umonile kunokumjezisa. Nathi siyini isigwebo, njengoba kunikezwe umthetho.
Abantu kuqala futhi okubaluleke kakhulu
Singalindela kanjani ukuthi ngolunye usuku, ushintsho olubalulekile lomphakathi olucabangela umuntu ngaphambi kwenzuzo lungenzeka ekhaya?
Osopolitiki bethu sebengabaphathi bezimali abalula, lapho lo msebenzi ubungeke wenziwe ababali. Cha, akufanele ulindele noma yini kubo. Umehluko omkhulu okhona phakathi kwempucuko "yesimanjemanje" efana neyethu, nokusebenza kwemiphakathi okuthiwa "incane", kulele ndawo ebalulekile: ubudlelwano nemali.
Imiphakathi yanamuhla iphenduka imali
Umphakathi wethu usuke waba yimali, ingcebo namandla. Umuntu ukhula ngemuva kwesidingo esinqunyiwe sokuthola okuningi, ukukhiqiza okuningi nokudla okuningi. Njengokuthi izindinganiso zethu kanye nokuziphatha kwethu kuthulisiwe, ngokugcwele sinobufakazi bokuthi singumzimba nomoya wethu wokuzinikela ekukhuleni komnotho okungcwele. Ithonya amaNdebele analo kwabaseNtshonalanga.
Ubulungiswa kumodi "yethemba"
Ekhaya, lowo onecala unecala futhi unecala, ngethemba lokuthi ukuvinjelwa kwenkululeko okuvunyelwe kuyamvumela ukuba ashintshe. Kumodi yethemba ukuthi ubulungiswa bethu busebenza. Kunoma yikuphi, kunemithombo embalwa kakhulu yezimali nezomuntu okumele isebenze ngenye indlela.
Kodwa-ke, ukuvinjelwa kwenkululeko, ukwehliswa okwesikhashana kwamalungelo ayisisekelo omuntu ongenayo umthelela oyifunayo. Abaningi baphindela emuva. Mhlawumbe umphakathi wethu kufanele ubheke kule nkinga: ubulungiswa benza izinqumo ziyazi ukuthi azisebenzi.
Isigwebo esinegama kuphela
Isijeziso esazi kusengaphambili ukuthi asizukusebenza sifanelana nokuhlukunyezwa kunanoma yini enye. Kunoma yikuphi, kubonakala ukwelashwa okungalungile. Kubi kakhulu ukuthi akaphumeleli, noma kuyaqabukela kakhulu, ukulungisa isimilo esoniwe emphakathini.
Kodwa ngemuva komuntu ngamunye "onecala" ucasha umuntu ngamakhono akhe nangezinto eziningi azizuzile, njengakumaNdebele Kungenzeka yini ukuthi abanamaphutha ethu babe ngcono uma, esikhundleni sokwenza bazizwe benecala, bethandwa? Kunzima ukwazi ngaphandle kokuzama.
Ukuphetha ngivumele ngethule ukubingelela kweNdebele, futhi ugcwele abantu:
Njengoba sithi sawubona, bathi "sawubona" ​​- ngiyakwazisa, ngiyakuhlonipha, ubalulekile kimi. Impendulo ithi "sikhona" - ngakho-ke ngikhona ngawe.
Ndebele: Ubuciko Bombuso Wase-Afrika
Okusha okungu-4 kusuka ku- € 35,12
Kusetshenziswe okungu-7 kusuka ku-19,99 €
Thenga i- € 35,29
Kugcine ukubuyekezwa ngoJulayi 25, 2021 10:59